आज यति धेरै घट्यो सुनको भाऊ ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति….. – SUDUR MEDIA
June 4, 2021 AdminLeaveaComment on आज यति धेरै घट्यो सुनको भाऊ ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति…..
आज शुक्रबार एकैदिन सुनकाे भाउ १ हजार ५०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ९०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो।
यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ३४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन हिंजो बिहिबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ३७५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । यो पनि हेर्नुहोस्ः बजेटको सकरात्मक प्रभाव : गाडीको मूल्य २३ लाखसम्म घट्यो ! नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले एउटै गाडीको २३ लाख रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ।
वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक नयाँ मूल्य सूची अनुसार हुन्डाई कोना इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्य एकैपटक २३ लाख रुपैयाँले घटेको छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध दुई मोडलका कोना इलेक्ट्रिक मध्ये एउटा १०० किलोवाट र अर्को १५० किलोवाट क्षमताको छ। १०० किलोवाट क्षमतायुक्त कोनाको मूल्य ७६ लाख ९६ हजारबाट घटेर ५६ लाख ९६ हजार पुगेको छ ।
यसमा २० लाख रुपैयाँले मूल्य घटेको छ। अर्को १५० किलोवाट कोना इलेक्ट्रिकको मूल्य भने ९४ लाख ९६ हजारबाट २३ लाख रुपैयाँ घटेर ७१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो। नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन्डाईको अर्को इलेक्ट्रिक गाडी आयोनिक ईभी हो । १०० किलोवाट क्षमतायुक्त आयोनिकको मूल्य ७६ लाख ९६ हजारबाट ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसमा १९ लाख रुपैयाँ मूल्य घटेको छ । गत वर्षको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क र भन्सार कर निकै बढाइएकाले अटोमोबाइल कम्पनीहरुले बाध्य भएर नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेका थिए । हालै प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिएको छ भने भन्सार दर पनि उल्लेख्य रुपमा घटाइएको छ।